२०७७ को दशैंमा ‘अल्लारे २’ ल्याउँदै अशोक
September 27, 2019 September 29, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on २०७७ को दशैंमा ‘अल्लारे २’ ल्याउँदै अशोक
निर्देशक अशोक शर्माले दशैंमा चलचित्र रिलिज गर्ने क्रम नरोक्ने भएका छन् । गतबर्ष चलचित्र ‘जय भोले’बाट दशैंलाई लक्षित गर्दै चलचित्र रिलिज गरेका अशोकले यो बर्षको दशैंमा पनि चलचित्र ‘रातो टिका निधारमा’ रिलिज गरेका छन् । अर्को बर्षको दशैंमा चलचित्र ल्याउने वा नल्याउने बिषयमा मिडियासँग खासै खुलेर नबोलेका अशोकले अन्तत, वि.सं २०७७ को दशैं पनि नछाड्ने […]
September 26, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की
८ असोज, एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ । जेलमा बन्द रहेको ग्याङस्टार लरेन्स विश्श्रोई ग्याङसँग जोडिएको एक सुटरले सलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको हो । सलमानलाई धम्की दिएको म्यासेज अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । पञ्जाब विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संठनको समूह सोपुको फेसबुक पेजमा ग्यारी शुटरले सलमानको तस्बिरमा रातो […]
६ असोज, काठमाडौं । शुक्रबारबाट देशभर प्रदर्शनमा रहेको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ ले प्रदर्शनको शुक्रबार, शनिबार र आइतबार आक्रामक व्यापार गरेको छ । चलचित्रले साताको पहिलो तीन दिन राजधानीका सबैजसो मल्टिप्लेक्सहरु ८० प्रतिशतभन्दा बढी अकुपेन्सी थियो । पहिलो दिन एक करोड ४७ लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको चलचित्रले दोश्रो दिन १ करोड ७८ लाख र तेश्रो […]
कपिल र अमिताभलाई झट्का, परेनन् उत्कृष्ठ ५ भित्र
September 21, 2019 September 21, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on कपिल र अमिताभलाई झट्का, परेनन् उत्कृष्ठ ५ भित्र
३ असोज, एजेन्सी । भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन र कमेडियन कपिल शर्मालाई नमज्जाको झट्का लागेको छ । अमिताभ र कपिलको शोले भारतीय टिआरपीमा आफूलाई यथास्थितिमा कायम राख्न सकेनन् । भारतीय टिआरपीको उत्कृष्ठ ५ मा यी दुबै शोहरु पर्न सकेका छैनन् । गत साता ‘द कपिल शर्मा शो’ तेश्रो स्थान र ‘कौन बनेगा करोडपति ११’ टिआरपीको […]
जरिनले सलमानसँग विहे हुन लागेको खुलासा गरिन् !
September 18, 2019 September 18, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on जरिनले सलमानसँग विहे हुन लागेको खुलासा गरिन् !
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता सलमानसँग आफ्नो विहे हुन लागेको विषयमा अभिनेत्री जरिन खानले हल्ला फिजाएर चर्चा बटुलेकी छिन् । सलमानकै चलचित्र वीर मार्फत बलिउडमा डेब्यू गरेकी जरिनाले सलमानसँगको विहे हुन लागेको कुरा हल्लाको रुपमा फैलिओस् भनेर चाहेको स्पष्टिकरण दिएकी छिन् । हालै बम्बे टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफ्नो सलमान खानसँग विवाह हुन लागेको खुलासा गरेकी थिइन् तर […]
September 15, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on मनु यसरी आइन् गायन क्षेत्रमा, समाजसेवामा पनि औधी रुचि
मनु लिम्बू नेपाली साँगीतिक क्षेत्रमा संघर्षरत नाम हो । पहिलो एल्बम ‘मन्द मन्द’ बजारमा ल्याएर परिचित बनेकी मनु वाल्यकालमा निक्कै राम्रो नृत्य गर्थिन । उनलाई सबैले नृत्यमै भविष्य बनाउँछन् भन्ने धेरै थिए । स्कुल तथा गाउँमा हुने प्रतियागिता कार्यक्रममा नृत्य मार्फत उनले सबैको मन जित्थिन् । पुरस्कार पनि पाउँथिन् । तर पछि उनले अझ राम्रो […]
‘रातो टिका निधारमा’को शीर्ष गीतमा साम्राज्ञी र अंकित
September 14, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on ‘रातो टिका निधारमा’को शीर्ष गीतमा साम्राज्ञी र अंकित
२७ भदौ, काठमाडौं । चलचित्र ‘रातो टिका निधारमा’को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा प्रमोद खरेल र मेलिना राईको स्वर छ । शहदेव ढुङ्गानाको शब्द र शम्भुजित बास्कोटाको संगीत रहेको पूरानो गीतमा भने उमेश राई र रमाना श्रेष्ठको स्वर रहेको थियो । गीतमा बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी रहेको छ । गीतको भिडियोमा ठूलो खर्च […]
‘भद्रगोल’ टीमको नयाँ सिरियलको नाम जुर्‍यो, आइफिल्क्समा पनि हेर्न सकिने
September 13, 2019 September 13, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on ‘भद्रगोल’ टीमको नयाँ सिरियलको नाम जुर्‍यो, आइफिल्क्समा पनि हेर्न सकिने
२५ भदौ, काठमाडौं । मिडिया हबसँग ‘भद्रगोल’ निरन्तरता दिन नसकिने देखेपछि छुट्टिएका ‘भद्रगोल’ पुराना कलाकारहरुले नयाँ टेलिसिरियलको नाम जुराएका छन् । टीम सबैको सल्लाहमा टेलिसिरियलको नाम ‘सक्किगोनि’ राखिएको छ । ‘सक्किगोनि’ सिरियलका चर्चित कलाकार कुमार कट्टेल ‘जिग्री’को थेगो पनि हो । नाम सार्वजनिक गर्दै भद्रगोलको पूरानो टीमले कलाकारितामा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । […]
‘तेरी मेरी कहानी’को लन्चमा रोए हिमेश, पत्नीले पुछिदिइन् आँशु
September 13, 2019 September 13, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on ‘तेरी मेरी कहानी’को लन्चमा रोए हिमेश, पत्नीले पुछिदिइन् आँशु
२५ भदौ, एजेन्सी । भारतीय गायिका हिमेश रेशमियाको आगामी फिल्म ह्याप्पी हार्डी एण्ड हिरको गीत ‘तेरी मेरी कहानी’ रिलिजअघि नै चर्चित भएको छ । गीतलाई हिमेशको साथमा इंटरनेट सेन्सेसन रानु मण्डलले गाएकी छन् । गीतको टीजर बुधबार रिलिज हुनेबित्तिकै ब्यापक चर्चा पाएको छ । अब बिहीबार गीत सार्वजनिक हुनेछ । गीतको टीजर सार्वजनिक कार्यक्रममा हिमेशको […]
अन्ततः ‘मोगुल’मा काम गर्न तयार भए आमिर
September 12, 2019 September 11, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on अन्ततः ‘मोगुल’मा काम गर्न तयार भए आमिर
बलिउड नायक आमिर खानले केही समय अगाडि मात्र आफू चलचित्र ‘मोगुल’मा काम गर्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका थिए । यो चलचित्रका निर्देशक सुभाष कपुरलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि आमिरले यो कदम उठाएका थिए । तर, अब नायक आमिर खान चलचित्रमा काम गर्नका लागि तयार भएका छन् । यो चलचित्रले गुलसन कुमारको कथा भन्नेछ । चलचित्रमा […]
Last 365 Days Visits: 20,926